Aragti: Maxaa la gudboon madaxweynaha Agoosto?
Ma noqon doonaa madaxweynaha cusubi mid keeni kara xaalad looga baxo marxalladda lagu jiro maanta?
Shacabka Soomaaliyeed waxaa hor yaalla maanta hawlo badan oo ku wajahan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyin kala duwan oo muddo dheer soo jiitamayey. Dhibaatooyinka ayaa waxay u kala baxaan qaar la wada ogyahay oo si aad ah afka loogu hayo in xal loo helo iyo qaar aan si sahal lagu arki karin una baahan in la iftiimiyo. Kuwa muuqdaa waa amni darrada dalka ka taagan, la’aanta dawlad loo wada dhan yahay, dhaqaale xumida, baahida iyo macluusha haysata caruur iyo haween,barakaca iyo xaaladaha qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dunida iwm.
Dhibaatooyinka dahsoon ee iyagana xalka u baahan ayaa waxaa ka mid ah cuqdada dheeraatay ee ku abuurantay quluubta shacabka, qabyaaladda loo fahmay iney tahay jaranjarada keliya ee loogu gudbo mansab siyaasadeed, dareenka midnimo iyo qowmiyad oo yaraaday iyo in loo arkay madaxtinimadu iney tahay fursad ku soo marta ee lagu noqon karo maalqabeen waqti gaaban gudahood.
Xalka dhibaatooyinkaa wuxuu u kala baxaa laba qaybood oo ah xal ku meel gaar ah iyo mid joogto ah. Xalka ku meelgaarka ah oo u gogolxaadhaya xalka joogtada ah ayaa ah
Dhibaatooyinka hor taagan ku tallaabsashada xal joogto ah waxay u kala baxaan qaar ka imaanaya gudaha dalka iyo kuwo dibedda:
Carqaladaha hor taagan dawlad kastoo somaliya u dhalata ee kaga timaada dibedda dalka :
Ø In dawladaha deriska la ah soomaaliya ay doonayaan dhismaha dawlad soomaaliyeed ee aan halis ku ahayn amnigooda,markaana waxaa dhacaysa iney hor joogsadaan si toos ah ama si dadban dawladda markaa aan u janjeedhin himilooyinka siyaasadeed ee ay ka leeyihiin soomaliya.
Ø Somaliya oo ah dawlad 100 % muslim ah ayaa mar walba waxay welwel ku haysaa waddamada yurub iyo markeykan in ay diinta islaamka ku fido shucuubta la deriska ah , markaana waxaa laga shaqeynayaa sidii ay itoobiya gacan ugu yeelan lahayd abuurista dawlad aan khatar ku ahayn amnigeeda.
Ø Ayadoo ay dadweynuhu u bisleen dhinaca maskax iyo aqoonba iney fahmaan qorshe walboo siyaasadeed ee dawladdu la timaado markaa si sahal ah bey warbaahinada dunida saamayn ugu yeelan karaan ra’yiga dadweynaha soomaaliyeed.
Haddaba maxaa la gudboon madaxweynaha cusub si uu u meel mariyo barnaamijka soo celinta amniga iyo midnimada somalia.
((DNS wuxuu ka shaqeynayaa soo saarista & baahinta afkaar siyaasadeed caafimaad qabta iney helaan shacabka soomaaliyeed. Riyadeenu waa shacab soomaaliyeed oo la barbar socda horumarka caalamka intiisa kale )) .
La xiriir dennyasomalia@gmail.com haddii aad leedahay riyo waddanino dhab ah.